Talo ku socota Madaxweynaha Koonfur galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen).Talada 1-aad | Arlaadi
Talo ku socota Madaxweynaha Koonfur galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen).Talada 1-aad
January 12, 2019 | Filed under: ARIMAHA BULSHADA,WARARKA MAANTA | Posted by: arlaadi
General Manuur Xasanoow (Mad-dheer) iyo General Xasanoow Manuur (Shaargaduud). Laba Halyeey oo u dhintay Dadkooda iyo Dalkooda, Ilaahay Naxariistii Janno ha ka waraabiyo. Aamiin
Mudane Madaxweyne talada kowaad ee aan ku siinayo waxay tahay inaad raacdo jidkii Adeeradaa oo u dhintay sharafta iyo wanaaga Dadkooda iyo Dalkooda, General Xasan Maxamed Nuur (Shaargaduud) iyo General Maxamed Nuur Xasan. Soomaaalidu waxay tiraahdaa “Waari mayside war hakaa haro.”
Madaxweyne Laftagareen ha raacin oo kuguma ogi jidkii uu qaaday Shariif Xasan. Mudane Kala dooro taariikh wanaagsan iyo taariikh xun. Kala dooro duco iyo Habaar. Kala dooro sharaf iyo ceeb. Kala dooro xasuus wanaagsan iyo shalaay. Kala dooro Aduun iyo Aakhiro.
Hadii aad rabto inta wanaaga ah raac wadadii ay qaadeen Adeeradaa. Hadii aad rabto xumaan, ceeb iyo Habaar qaad jidkii uu qaaday Madaxweynihii kaa horreyay Shariif Xasan Sheekh Aaden.
General Maxamed Nuur Xasan (AUN). wuxuu ahaa halyeey qiimo weyn iyo qadarin ku dhex lahaa ciidanka Xooga dalka Soomaaliyeed wuxuu u dhintay wanaaga Dadkiisa iyo Dalkiisa.
Siday ay ii sheegeen saraakiil dhowr ah oo ka mid ahaan jiray ciidanka Xooga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Nuur (AUN) wuxuu lahaa ama ahaa Maskaxdii dhistay ee hormuudka u ahayd dhismaha ciidanka Xooga dalka Soomaaliyeed oo noqday ciidanka sadexaad ee ugu Awooda badan qaarada Afrika.
Generaalka waxaa si gardaro ah loogu dilay magaalada WAAJID 11-kii November sanadkii 1990-kii waxaa dilay ciidamo la oran jiray koofiyad cas, oo ahaa ciidankii ilaalin jiray Maxamed Siyaad Barre.
Nasiib daro General Maxamed Nuur wuxuu noqday Halyeey qaran oo loogu abaal guday in si xaqdaro ah oo gardaro ah loo dilo.
Mudane Madaxweyne Waxaan soo jeedin lahaa in xeerada ama saldhiga ciidamada Koonfur galbeed ee ugu weyn loogu magac daro General Maxamed Nuur Xasan (Mad-dheer).
La soco Talada 2-aad